4.5/5 32 iireyithingi & 32 uphononongo 100% Ivunywe ngabasebenzisi abangama-32.
Iinkwenkwezi ezi-5 I-21% igqityiwe amashumi amabini ananye 4 Iinkwenkwezi I-10% igqityiwe 10 Iinkwenkwezi ezi-3 I-1% igqityiwe Nye Iinkwenkwezi ezi-2 0% Gqibezela 0 Iinkwenkwezi ezi-1 0% Gqibezela 0
ithambile kwaye iyafumisa
Akukho nanye kwezi ziphezulu
ushiya ulusu lomile
Iimpawu ze-Cetaphil Moisturizing Cream
Ifunxwa ngokukhawuleza kwaye ithambisa ulusu.
Akukho vumba lokwenziwa.
Ayivali i-skin pores
Cetaphil Moisturizing Cream Iinkcukacha
Ifumaneka kwi : 250gm, 80gm
Cetaphil Moisturizing Cream Izithako
I-Polyglycerylmethacrylate kunye nepropylene glyceryl stearate
Iparafini elulwelo olula
I-Dimethicone kunye ne-Dimethiconol
Ioli ye-almond ecocekileyo
Cetaphil Moisturizing Cream Ukusetyenziswa
Igcina ulusu luthambile
Thintela ukulahleka kokufuma
IsiSwati Agarwal |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
4.7 / 5 < p> Iluncedo ? 0 0 Phendula (0) ···
Rajeswari |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Zine.Zintlanu I-Rajeswari iyayivuma le mveliso
Kudala ndisebenzisa le nto kwintombi yam. Ndiyazithanda iziphumo zayo. Yeyona khrimu yokuthambisa yohlobo lwayo. Ayinamafutha kwaye ayincangathi. Ikwafunxwa ngokukhawuleza kakhulu eluswini. Inceda ekugcineni ulusu lomntwana luthambile kwaye lutsha.
Poonam Sehrawat |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
4.6 / 5 IPoonam Sehrawat iyayivuma le mveliso
Ubumnene ngenxa yesikhumba
Usisi wam usebenzisa le cream for incinci.ayinamafutha kwaye ithatha ngokukhawuleza. Sivavanywe ngokwezonyango usebenzisa le cream yonke imihla kwaye isebenza kakuhle kulusu olomileyo. Eli vumba lithambile kwaye alikhathazi ngeempumlo zolusu olubuthathaka.lifumaneka lula emarikeni ngexabiso elifikelelekayo.
|Kunyaka oyi-1 odlulileyo
4.1 / 5 ivuma le mveliso
Icetyiswe ngumhlobo wam ke ndiyizise lento kwaye Ayinamafutha kwaye ithatha ngokukhawuleza. Ivavanyelwa ulusu olubuthathaka ngoko ke ikhuselekile kusana lwam. Ayivaleki imibhobho sana lwam. Ivavanyiwe ngesikhumba kwaye ayinavumba lokwenziwa ngoko ke ithambile kwaye ikhuselekile kusana lwam.
Keerthika Sivasubramaniam |2 kwiminyaka eyadlulayo
Sakshi Sharma |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.6 / 5 I-Sakshi Sharma iyayivuma le mveliso
I-Citaphil yeyona nto ndiyithandayo. Ndonwabe kakhulu kuba ndiyisebenzisa ukusuka ngaphezulu konyaka omnye. Ndaneliseke kakhulu yiyo. Njengoko ndinolusu olomileyo kodwa le cream yandinceda kakhulu kwaye inika ulusu lwam i-moisturizer egcweleyo endingeva noba yomile kwaphela. Ndiyayincoma kakhulu..
Sameera Pathan |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.2 / 5 Samera Pathan uyawavuma le mveliso
Usisi wam usebenzisa le cream kwizinto ezincinci zakhe..Ndimele nditsho ukuba i-formula i-hypoallergenic. Isasazeka kakuhle eluswini lomntwana kwaye ifunxeka ngokukhawuleza. Ivumba elimnandi lithambile kwaye alizikhathazi iimpumlo ezibuthathaka. Usebenzisa kakhulu le moisturizer kwibhafu yakhe yosana kwaye ishiya ulusu lufumile imini yonke.
Garima Kakkar |2 kwiminyaka eyadlulayo
UGarima Kakkar uvuma le mveliso
I-Cetaphil moisturizing cream ithambile esikhumbeni ayinavumba kwaye ayibangeli naluphi na uhlobo lokucaphuka okanye i-allergies eluswini ifumaneka lula emarikeni ngexabiso elifikelelekayo nam ndisebenzisa okufanayo kuba yenza ulusu. yondla
Dharani Rajesh |2 kwiminyaka eyadlulayo
5/5 UDharani Rajesh uvuma le mveliso
ndisebenzisa i-cetaphil moisturizing lotion ixesha elingaphezu konyaka ... ebusika izandla zam nemilenze yomile kwaye le cream yandinceda ... izandla zam nemilenze yayiza kuchithwa ngenxa yokoma, emva kokusebenzisa le cream yokuthambisa izandla zam kwaye imilenze igudile kwaye ifumile... le lotion ivala ukufuma kwaye yondle ulusu...
USumaiya P |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.5 / 5 < p> Iluncedo ? 0 0 Phendula (0) ···
Jaya Thapa |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.6 / 5 I-Jaya Thapa iyayivuma le mveliso
Ndathengela umntanam la moisturizing cream. Kaloku ehlotyeni ndandimnxibisa amadiapers so wayenerhashalala so ndaye ndathenga la cream after ndisebenzise la cream ulusu lwakhe luba soft and more hydrated. Kwaye uziva ekhululekile kakhulu. Kwaye ndicebisa oku kuye wonke umntu.
Anita Jadhav Dhamne |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.7 / 5 U-Anita Jadhav Dhamne uyayivuma le mveliso
ICetaphil moisturizing cream ithambisa ulusu losana lwam kwaye ilugcine luthambile. Ayinamafutha kwaye ifunxa ngokukhawuleza. Ivavanyelwa ulusu olubuthathaka ngoko ke ikhuselekile kusana lwam. Ayivaleki imibhobho sana lwam. Ivavanyiwe ngedermatological kwaye ayinavumba lokwenziwa ngoko ithambile kwaye ikhuselekile kusana lwam.
Vatsla Verma |2 kwiminyaka eyadlulayo
4.4 / 5 IVatsla Verma iyayivuma le mveliso
Ndandisebenzisa iCetaphil Moisturizing Cream kum kwaye xa umntwana wam ezalwa ndaqalisa ukuyisebenzisela naye. I-cetaphil ikwacetyiswa ngugqirha wam wabantwana. igcina ulusu losana lwam lumanzi kwaye lufumile ixesha elide. Ukusetyenziswa ngokuqhubekayo koku kwenze ukuba ulusu losana lwam lube thambile kwaye luthambile.
Anuradha Giridharan |2 kwiminyaka eyadlulayo
I-Anuradha Giridharan ivuma le mveliso
le yenye yeebrendi endizithandayo ukusukela oko umntwana wam wazalwa eyisebenzisa. Ndinolusu olunamafutha ngexesha lasebusika ndinolusu olomileyo olucaphukisa ulusu lwam kakubi. le cream inceda ukuthambisa ulusu kakuhle ngaphandle kwe patch egreasy emhlophe yondla ulusu kakuhle. le yimveliso ekufuneka ithengelwe wonke umntu.
Ngenisa Nye Mbini 3
UPreeti Rajendran |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Yintoni umhla wokuphelelwa kwe-Cetaphil Moisturizing cream?
Neha Krishnan |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Umhla wokuphelelwa uya kukhankanywa kwityhubhu.
Likitha Jaju |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ngaba i-Cetaphil Moisturizing cream ilungele ulusu oludibeneyo?
Meera Sethi |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ewe, ukhilimu ufanelekile kuzo zonke iintlobo zesikhumba.
Ananya Sharma |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
uyisusa njani ipeyinti ezandleni
Ndingayisebenzisa i-Cetaphil Moisturizing cream ehlotyeni?
Geeta Ghokule |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ewe, ikhilimu iyasebenza kakhulu ehlotyeni.
Sanjana Rathod |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ngaba i-Cetaphil Moisturizing cream vegan?
sushmita |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Rashmi Bhatia |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ngaba i-Cetaphil Moisturizing cream ingasetyenziselwa iintsana?
Monisha Sarkar |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ewe, inokusetyenziswa. Nangona kunjalo, sikucebisa ukuba udibane nodokotela ngaphambi kokuba usebenzise i-cream kubantwana.
amrutha anmol |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ngaba amadoda angasebenzisa i-Cetaphil Moisturizing cream?
Vandana Apte |Kunyaka oyi-1 odlulileyo
Ewe, ikhilimu ingasetyenziswa ngamadoda nabasetyhini.
Umtshato Uthandekayo Iinkonzo Zenja Makeup Professionals Ukufunda Tarot Cards Ulutsha Imiboniso Bhanyabhanya
Ngaba irayisi emdaka ifanele ukuba ibe nzima
indlela yokuzikhusela kwizityholo zokuxhatshazwa
indlela yokwamkela udliwanondlebe ngomnxeba
yintoni yokondla iibhokisi zebhokisi yabantwana
umatshini wokuthunga imvumi yeediliya uyathengiswa
ukucoca iglasi ngaphandle kwemigca